Adeegga Dayactirka ee ugu Fiican Meheraddaada Maareynta Hantidaada
Features » Dayactirka
Zeevou waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fudud dusha uga saarto dhamaan arrimaha dayactirka oo aad iska hubiso horumarkooda min A ilaa Z.
Hantida aan la ilaalin, waa halaag in la bilaabo burburka, iyo soo jiidashada dib u eegista xun ee hawsha. Taasi waxay ka dhigan tahay deggenaanshahaaga iyo qiimaha aad ka qaadi karto hoos u dhac, khadkaaga hoose wuxuu bilaabmayaa inuu u muuqdo mid ka sii jilicsan oo wax ka beddelaya. Dakhliga hoose ee xisaabaadkaaga bangiga ayaa la macno ah inay adkaatay maalgashiga keenista hantida si xoqan, wax walbana waxay ku sii kordhayaan koontaroolka.
Sidaa darteed waa muhiimadda ugu weyn in la hubiyo in hantida si wanaagsan loo dayactiro laga bilaabo maalinta koowaad. Si aad u awoodo inaad sidaas sameyso, nidaam ayaa loo baahan yahay kaas oo kuu oggolaanaya inaad la socoto arrimaha kala duwan, iyo inaad aragto sida adiga iyo kooxdaadu u horumarineysaan xallintooda. Maaddaama inta badan PMSes iyo Maareeyayaasha Kanaalku aysan bixin maaraynta dayactirka, inta badan dadka ka shaqeeya guryaha waxay ku dambeeyaan inay maciinsadaan nidaam dheeri ah sida Asana or Trello si ay u maareeyaan hawlahooda dayactirka. Tani waxay abuurtaa wax-qabad la'aan maamul waxayna saameyn ku yeelataa faa'iidada ganacsiga.
Sidee ayuu Maamulka Dayactirka ee Zeevou u caawin karaa?
Zeevou waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sii kor socoto dhammaan arrimaha dayactirka. Adigu waxaad ku dari kartaa arrimaha dayactirka gacanta, la soco cidda soo warisay, iyo sida ay degdegga u yihiin. Intaa waxaa sii dheer, waad ku dari kartaa sharraxaad oo aad ku dhejin kartaa lifaaqyo si aad u muujiso dhab ahaan waxa socda. Zeevou Fix ayaa markaa kuu oggolaaneysa inaad la socoto arrimaha markay ku socdaan heerarka kala duwan ee xallinta.
Haddii arrin uu soo sheego qof marti ah, waxaan soo saarnay muuqaal kuu oggolaanaya inaad hubiso in xubin ka mid ah shaqaaluhu uu hubiyay arrimaha weli iyo in kale, si looga fogaado khidmadaha wicitaanka ee qaaliga ah ee arrimaha ka dhalan kara si xun u isticmaalka qalabka. martida tusaale ahaan halkii ay ka noqon laheyd arin dhab ah iyaga.
Maxaa intaa dheer, Zeevou ah Mobile App waxay u oggolaanaysaa shaqaalaha guryaha inay ka warbixiyaan arrimaha dayactirka goobta nadiifinta, iyo inay ku soo lifaaqaan sawirro ama fiidiyowyo arrinta sharaxaadda wixii khaldamay.
In ka mustaqbalka, waxaan ka shaqeyn doonaa ogolaanshaha arrimaha dayactirka in loo qoondeeyo xubin ka mid ah shaqaalaha, si ay u eegaan howlaha oo ay kuugu cusbooneysiiyaan horumarka barnaamijka Zeevou Mobile App.